‘केटी के खेलौना हो ? ’ | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण १६ गते ०९:२६
प्रमिला विश्वकर्मा । आजभोलि समाचारमा खुब सुन्न पाईन्छ एसिड प्रहारका घटनाहरु । मुस्कान खातुनको आलो घाउ सेलाउन नपाउदै अर्की नेपाली चेली पवित्रा कार्की माथि एसिड प्रहार भयो आखिर कारण के हो ? किन बारम्बार नारी माथि एसिड प्रहार भईरहन्छ ? के नारीलाई स्वतन्त्ररुपमा बाच्न पाउने अधिकार छैन ? कि सधै महिलाले चै हिँसा सहेर बस्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ ? होइन भने यतिका घटनाहरु घटिरहदा किन यो सरकारले एउटा दरिलो नियम कानुन बनाउन सक्दैन ? हिजो सति प्रथाको नाममा श्रीमान् संगसंगै जिउँदै जलेर जाने नारी आज २१औं शताब्दीमा पनि एसिडबाट जलेर पलपल मर्न पर्ने हो र ? सबैको आ–आफ्नै जिन्दगी हुन्छ चाहे पुरुषको होस् या नारीको । दुवैको जिन्दगी जिउने तरिका पनि आ आफ्नै किसिमको हुन्छ । कोही पुरुषहरु समय अनुसार बदल्न चाहन्छन् , समय अनुसारको फेसनमा रमाउन चाहन्छन् , साथीहरू संग घुम्न डुल्न , समयको माग अनुसार आफु स्मार्ट भएर हिड्छन् । आफुलाई हरक्षण स्वतन्त्र महशुस गरेर रमाईरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई न परिवारको डर हुन्छ , न समाजको डर हुन्छ , न कुनै केटीहरुले एसिड आक्रमण गर्लान् कि भन्ने डर हुन्छ । तर एउटी नारी पुरुषले जस्तो खुलेर हिड्न नसकि घरपरिवार , समाज, साथीभाइ , इष्टमित्र सबै कुरा हेरेर मनमा सुनामीका छाल जस्ता डर पालेर मनका हरेक ईच्छा आकाक्षां मनमा नै मारेर बसिरहन बाध्य हुनुपर्छ ।
स्वभावैले नारी जातिहरु शृङ्गारमा अलि बढी रुचि राख्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । धेरै नारीहरु खुलेर हाईफाई भएर हिड्ने आट गर्न सक्दैनन् तर जसले आट गरेर साथीभाइ संग रमाइलो गर्न , चलिरहेको फेसनमा रमाउन, मन हुदा हुँदै पनि सामाजिक आर्थिक जस्ता विभिन्न अवरोधहरुलाई संगाल्दै सम्हाल्दै थोरै मुस्कुराउनु के खोज्छन् तर त्यो मुस्कानमा किन पुरुषहरुको गिद्दे नजर लाग्छ ? जसरी एउटा सुन्दर फूलमा किरा लागेर फूल कुहिन्छ त्यसैगरि पुरुषहरुले त्यो खुसी र मुस्कान लुटेर लान्छन् । हो म मान्छु सुन्दर फूल सबैलाई मन पर्छ । तर किन बुझ्दैनन् त्यो फूलको माली पनि हुन्छ भन्ने कुरा । राम्रो चिज अक्सर जो कोहीलाई मन पर्छ । आफ्नै भए हुन्थ्यो लाग्छ । तर राम्रो चिज सबै आफ्नो हुनुपर्छ यो सम्भब पनि त छैन नि.. अब के राम्रो चिज आफ्नो भएन भनेर संसारमा राम्रो कुरा रहनै पाउदैन र ?
भर्खरै घटेको एसिड प्रहारको घटना त मात्र एउटा उदाहरण हो । यस्ता घटना दर्जनौ घटेका छन् तर यहाँ अपराधीहरुलाई केही समय जेल राखेर निकालिन्छ । अनि ती नै अनुभवी अपराधीले अर्को आफू जस्तै अपराधी जन्माउदै जान्छ । वा मेरो देशको कानुन... एसिड प्रहार गरि कसैको जिन्दगी तहसनहस पारेर फरार भएको अपराधीलाई सिधै फाँसी नहानेर । बल्ल तल्ल समातेर सोधपुछ गरिन्छ किन एसिड प्रहार गरिस् ? जबाफ दिन्छन्, ‘म यो केटीलाई असाध्यै माया गर्थे तर यसले मलाई धोका दिई त्यसैले, यो केटीलाई मन पराउथे माया गर्थे तर त्यसले स्वीकार गरिन त्यसैले, यो केटीलाई माया गरे तर यसले रुपको घमण्ड गरि, धनसम्पतिमा घमण्ड गरि त्यसैले , यो केटी र म लामो समय देखि एक अर्कालाई माया गथ्यौं तर यसले धोका दिई त्यसैले , यति मात्र नभएर म यसलाई माया गर्थे यसले नि गर्थी अनि शारीरिक सम्बन्धको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि यसले इन्कार गरि रुपको घमण्ड गरेर आदि इत्यादि ।’ यस्तै यस्तै कारण देखाउछन् । के यहि कारण पर्याप्त छ त एसिड प्रहार गर्नलाई ?
होइन के लाग्छ यी केटाहरूलाई केटी के खेलौना हो , जसलाई जसरी खेलाए पनि हुन्छ ? कि आफ्नो पर्सको पैसा ठान्छन्, जसलाई जसरी जतिबेला मन लाग्छ त्यतिबेला प्रयोग गर्न सक्छन् ? आखिर के सम्झिन्छन् ? कुनै केटी रुपमा राम्री छ त यसमा उसको के दोष ? , कसैले उसलाई उसको रुप हेरेर नै मन पराउँछु , माया गर्छु भन्छ भने यसमा केटीको के दोष ? कसैसंग मन मिल्यो एकअर्कामा भावना साटासाट भयो तर विवाह अगाडि नै शारीरिक सम्बन्धको लागि अनुरोध गर्दा म संग यस्तो हुदैन, विवाह अगाडि यस्तो गर्न म सक्दिन भनेर ईन्कार गर्नु केटीको दोष हो ? कि केटाहरुले अलि पैसा र धनसम्पति देखाको र चिप्लो कुरा गरेकै भरमा जे जे भन्छन् त्यही चुपचाप नमान्नु केटीको कमजोरी हो ?
म मान्छु सबै केटा खराख नियतका हुदैनन् । मैले यति भनिरहँदा सबै पुरुष खराब हुन्छन् भन्न खोजेको होइन । म पुरुषहरुलाई सधै सम्मान गर्छु । तर म ती पुरुषहरुलाई यो सब भनिरहेछु जो मुहारमा ईमानदारिता देखाएर नियतमा खोट बोकेर हिडिरहेका छन् । अरे यार, केटा हो, दिमागमा किन गोबर भरेर हिडेका छौ । ना कि , केटीले रुपको घमण्ड गरि ,पैसा धनसम्पतिको घमण्ड गरि या त आफ्नो माया स्वीकारी न भन्दैमा बदला लिन्छु भन्ने सोच बोकेर हिड्छौ । तिमीहरूलाई थाहा छ, यो हर्कतले तिमी आफुले खनेको खाडलमा आफै परिरहेको छौ नि । आफ्नो खुट्टामा बन्चरो आफैले प्रहार गरिरहेको छौ नि । एक छिन ठन्डा दिमागले सोचेर हेर त । तिमीसंग बदला लिन भन्दा अरु विकल्प छैन र ?
आज तिम्रो माया स्वीकार नगरेकि लाई भोलि आफु उसको लायक भएर उसलाइ पछुतो हुने बनाउन, ज जसले आज रुप धनसम्पतिको घमण्ड गरेकि छन् भोलि तिमीलाई देख्दा पछुताउने बनन् , आज तिम्रो चोखो मायालाई लत्याएर विश्वासघात गरेर हिड्ने उसले पछि तिमीलाई सम्झी सम्झी पछुताउने बनाउन् राम्रो काम गरेर किन नराम्रो बाटो नै रोज्छौ ? एकछिन सम्झ त , आज तिमीले जति एउटी केटीलाई चाहेर माया गरेर पछि लागेको छो त्यति नै तिमीलाई चाहने पनि त थिए होलान् । के तिमीले ती सबै तिमीलाई चाहनेहरुको पर्पोज एसेप्ट गरेको छौ ? हो , याद आयो होला होइन ? कसै न कसैलाई तिमीले पनि वेवास्ता गरेको थियौ । उसको नजरमा तिमी पनि त एक नम्बरको घमण्डी सावित भएका छौ नि । तर आज सम्म उसले त घमण्डी छस् भनेर बदला लिने सोचले एसिड प्रहार गरेकि छे ? छैन नि होइन ?
अब आफूलाई हेर त , तिमी चै किन एउटी केटीले आफ्नो चाहाना पूरा गरिन् , मैले भने जस्तो व्यबहार गरि न भनेर वदला लिने सोच् बनाउछौ किन ? यदि तिमीलाई कसैले मन पराउदैन त मन नपराउन पाउँछ ।तर तिमीले उसलाई बदला लिनको साट्टो किन के कारणले आफुलाई मन पराईन भनेर आफ्नो कमिकमजोरी खोजेर सुधार गरि उसले चाहे भन्दा बढी लायक बनेर हिड्न सक्दैनौं र ? यदि तिमीलाई कसैले मायाको नाटक गरेर विस्वासघात गरि छाडि जान्छ भने जान देऊ, किन त्यस्ता मुर्खमाथि बदला लिने सोच बनाएर आफ्नो समय र जीवन वर्वाद गर्छौ ? उसले दिएको चोटलाई अबसर सम्झेर अगाडि बढेर हेर न ।
यति भनिरहँदा हर समय केटाहरु मात्र गलत हुन्छन् भन्न खोजेको होइनन् । सबै केटी त न भनौ तर खुद मेरो आँखाले मैले नै देखेको छु त्यस्ता केटीहरु जसले केटाहरुलाई दिएको पीडा हेर्दा टुक्राटुक्रा पारेर मार्दा पनि सजाय कम हुन्छ तर हामीले कानुन आफ्नो हातमा लिने कोसिस गर्नु हुदैन । अरे केटी हो , तिमीहरु शारीरिक रुपले राम्री छौ , श्रृङ्गार धपक्कै वलेकि छौ भन्दैमा केटाहरु छानी–छानी आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेसी कपडा फेरेसरी फेर्दै हिड्नुपर्छ भन्ने छैन नि । एक पटक भविष्य सम्झ । जिन्दगी सदैव एकैनासले चल्दैन , जवानी भनेको उमेर रहुन्जेल मात्र बल्ने हो । अनि थाहा होला ‘दुनियाँ बलेको आगो मात्र ताप्ने गर्छ ।’
एसिड प्रहारका घटना आज मात्र होइन एउटा नारी मात्र होइन यस्ता धेरै घटना घटेको छ । धेरै नारीहरु जलेको अनुहार र हारेको मन लिएर पल पल मर्दै वाचेका छन् । के हाम्रो केही कर्तव्य छैन ? आफ्नो देशको नारीलाई अर्को पापीले जिउदै जलाईरहेको छ के हामी यसैगरी टुलुटुलु हेरेर बसौ ? अब हाम्रो काधमा जिम्मेवारी थपिएको छ हामीले हाम्रो सन्तानलाई कस्तो शिक्षादिक्षा र संस्कार दिएर हुर्काउने जसले गर्दा भोलिका दिनहरुमा यस्ता घटना तपाईं हाम्रो घरपरिवारमा नघटोस् । वास्तवमा यस्तो घटना घट्नुको पछाडि सरकारको नीति नियम कानुन र कार्वाही फितलो भएर हो । यदि सरकारले कानुन दरिलो बनाएर कार्वाहीमा कडाई गर्ने हो भने यस्ता घटना संवत्ः घटेर जाने थियो । अब ‘हामी सबैले एउटै माग गरौ’ यस्ता कसै माथि एसिड प्रहार गर्ने, बलात्कार गर्ने, निर्दोसको ज्यान लिने लगायत अन्य अपराध गर्ने अपराधीहरु धर्तीका बोझ हुन् , यिनीहरु बाचेर केही काम छैन यस्ताले समाजमा विकृति फैलाउने काम भन्दा अरु केही गर्दैनन् यसैले यीनीहरुलाई फासीको सजाय दिने कानुनको माग गरौ ।’